Siriqda Uu Dhigay Thabit Cabdi Oo Ka Hor Doorashada 2021-ka Isbadel Helaya - Awdinle Online
Siriqda Uu Dhigay Thabit Cabdi Oo Ka Hor Doorashada 2021-ka Isbadel Helaya
January 16, 2020 (Awdinle Online) –Sida uu maanta ka shaaciyey Thabit Cabdi Maxamed Magaalada Muqdisho waxa uu furay Xarunta Dhexe Ee Xisbigiisa Awooda Shacabka.
Waxa Xaruntaan ay soo dhaweyneysaa cid walbo oo loo arko in Hankiisa siyaasadeed xoojin karto sida uu warka udhigayna uu rajo ka qabo inay guul ka keenaan Hamigooda.
Duqii Hore Ee Muqdisho ayaa waxa uu heli doonaa sida la leeyahay ka hor doorashada 2021-ka taageero weyn oo kaga imaan doonta Saamileyda Siyaasadeed qaarkood.
Waxa uu albaabada ufuray halkii loogu soo hagaagi lahaa,waxa uu muujiyey inuu diyaar uyahay in wax wada qabsi iyo beyco lala galo.
Dhalinyaro ayaa ubadan Xisbigiisa oo xubno ka ah,Qaar Wariyeyaaal ah,Samafalayaal,Dhakhaatiir iyo Qaar Qurba joog ah,iyagoo ku dedaalaya ka miro dhalinta hiigsigooda.
Thabit Cabdi ayaa Saaxiib lahaa madaxweyne Farmaajo oo muddo ay mareykanka wada joogeen,waxa loo magacaabay 2017-kii inuu noqdo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Balse Xilka ayuu ku waayey Is fahmi waa Ra’iisal Wasaare Kheyre soo kala dhex galay.
Waxa uu Thabit heystaa taageero badan oo Shacabka Ah taas uu ku kasbaday adeegii iyo is garab taagii markii ay dhacday Musiibadii Qaraxii Soobe 2017-kii Bishii Oktober.
Balse Thabit dhinaca kale waxaa ku taalla Bar madoow oo kasoo raacday Mareykanka dhalinyaradii Soomaaliyeed uu saxiixay in Soomaaliya lagu soo celiyo,xilligaas oo Safaarada Soomaaliya Ee USA uu katirsanaa Madaxdeeda.
Previous articleMadaxweynayaasha KGS iyo hir-shabeele oo gaaray Muqdisho
Next articleXog: waxaa jira warar sheegaya in DFS looga adkaan karo Doorashada Galmudug